शारीरिक भाषा - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
मिडिया > जर्नल फोकस फोकस > पत्रिका फोकस यीशु 2019-03 > शरीर भाषा
के तपाइँ एक राम्रो संचारक हुनुहुन्छ? हामी न केवल हामी के भन्छौं वा लेख्दछौं, तर संकेतहरु संग पनि होशियारी वा अनजाने मा दिन्छौं। हाम्रो शरीर को भाषा अन्य मानिसहरु संग कुराकानी र सरल बोलीएको शब्द को लागी अतिरिक्त जानकारी पठाउँछ। उदाहरण को लागी, एक साक्षात्कार मा भाग लिने कोहि आफ्नो सम्भावित नियोक्ता लाई बताउन सक्छन् कि उनीहरु सहज छन्, तर उनीहरुको clenched हात र कुर्सी को fidgeting अरु केहि बताउँछन्। एक व्यक्ति अर्को व्यक्ति के भन्दैछ भन्नेमा रुचि देखाउन सक्छ, तर उनीहरुको आँखा सम्पर्क को लगातार कमी खेल टाढा दिन्छ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, प्रेरित पावल वर्णन गर्दछन् कि हामी प्रत्येक ख्रीष्ट को शरीर को एक भाग हो: "तिमी ख्रीष्ट को शरीर हौ र प्रत्येक एक सदस्य हौं" (१ कोरिन्थी १२:२1)।
प्रश्न उठ्छ: शरीरको ख्रीष्टको शरीरको सदस्यको रूपमा तपाईं कुन भाषा बोल्नुहुन्छ? तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ वा धेरै राम्रो, सकरात्मक, र प्रोत्साहनजनक चीजहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, तर यो तपाइँको व्यवहार गर्ने तरिका हो जसले अझ धेरै भन्छ। तपाईं कसरी आफ्नो जीवन आकार दिनुहुन्छ ठूलो कुराकानी गर्दछ र स्पष्ट तपाईंको मानहरू र विश्वास के हो। तपाईंको मनोवृत्तिले सही सन्देश दिन्छ जुन तपाईंले आफ्ना सँगी मानवहरूमा ल्याउनुहुन्छ।
के हामी न्यानो, मित्रैलो, र अरूलाई व्यक्तिगत, स्थानीय चर्च, वा चर्चको रूपमा ग्रहणशील छ? वा हामी स्वार्थी र पागल छौं र सायद हाम्रो आफ्नै सानो समूह को बाहिर कसैलाई ध्यान दिइरहेका छौं? हाम्रो मनोवृत्ति बोल्छ र अवलोकन गर्ने विश्वसँग कुराकानी गर्दछ। हाम्रो प्रेम, स्वीकृति, सराहना र सम्बन्धित शब्दहरू उनीहरूको ट्र्याकमा रोक्न सकिन्छ यदि हाम्रो शरीर भाषा ले इन्कार गर्छ भने।
«किनकि जसरी शरीर एउटै हो र धेरै अंगहरु छन्, तर शरीरका सबै अंगहरु, यद्यपि उनीहरु धेरै छन्, अझै पनि एउटै शरीर हुन्: ख्रीष्ट पनि। किनकि हामी सबै एउटै आत्माले एउटै शरीरमा बप्तिस्मा लिएका छौं, चाहे हामी यहूदी हौं या ग्रीक, दास वा स्वतन्त्र, र सबै एउटै आत्माले प्रभावित छौं। किनकि शरीर या त एक अंग हैन, तर धेरै »(१ कोरिन्थी १२: १२-१४)।
हामी यो भन्न चाहन्छौं कि हाम्रो शरीर को भाषा सबै साथी मानव को सम्मान ल्याउनु पर्छ। जब हामी माया को महान तरीका प्रदर्शन गर्छौं, उनीहरु देख्नेछन् कि हामी वास्तव मा ख्रीष्ट को चेला हौं किनकि उहाँले हामीलाई माया गर्नुभयो र हाम्रो लागी आफैंलाई दिनुभयो। येशूले भन्नुभयो: "म तिमीलाई एउटा नयाँ आज्ञा दिन्छु: कि तपाइँ एक अर्कालाई माया गर्नुहुन्छ। जसरी मैले तिमीलाई माया गरेको छु, तपाइँ पनि एक अर्कालाई माया गर्नु पर्छ। यस बाट सबैलाई थाहा हुनेछ कि तपाइँ मेरो चेला हुनुहुन्छ: यदि तपाइँ आफैंलाई माया गर्न को लागी ठाउँ दिनुहुन्छ "(जॉन 13,34: 35)। जबकि हामी भित्र को लागी ख्रीष्ट को लागी प्रेम जीवन मा व्यावहारिक रूप मा सबै परिस्थितिहरु मा अन्य मानिसहरु लाई दिईन्छ, हाम्रो शरीर को भाषा हामी के भन्छौं पुष्टि गर्दछ। त्यो प्रभावकारी संचार हो।
शब्दहरू तपाईंको मुखबाट यति सजिलै बाहिर आउँदछ र सस्तो हुन्छ यदि ती तपाईंको कार्यहरू र प्रेमको मनोवृत्तिले समर्थन गर्दैन भने। जब तपाईं कुरा गर्नुहुन्छ, यो बोलेको वा लिखित शब्द मार्फत होस् वा तपाईंको जीवन शैली, मानिसहरूले तपाईंमा येशूको प्रेम देख्न सक्दछन्। एक माया जसले माफ गर्दछ, स्वीकार गर्दछ, स्वस्थ हुन्छ र सबैलाई पुग्छ। यो तपाईंसँग भएको सबै कुराकानीहरूको लागि तपाईंको शरीर भाषा हुन सक्छ।